Nhọrọ Nhọrọ maka Beginners🥇 Mụta ịzụ ahịa maka uru bara ụba! Ọnwa Abụọ 2021
Mụọ 2 Trade 2021 Ntuziaka Na Ahịa Nhọrọ!
Nhọrọ na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọnụahịa ọdịnihu nke akụ site na ịkwụ obere ego. Ọ bụrụ na amụma gị abata, ị ga-azụ ma ọ bụ ree akụ ahụ na ọnụego iku nke nkwekọrịta nhọrọ - nke pụtara na ị na-akpata ego.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-efunahụ ihe adịchaghị mma. Dika odi, ahia ahia bu uzo di nma iji kpughee ahia ahia na uzo di ala, ugwo oru di elu.
Na na kwuru, trading nhọrọ bụ a ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọkaibe karịa ịzụrụ na-ere omenala akpan owo klas - ya mere, ọ dị mkpa na ị maara ihe ị na-eme tupu ikewapụ gị ego gị.
Nke a bụ ihe mere anyị ji atụ aro ịgụ akwụkwọ anyị Mụọ 2 Trade 2021 Ntuziaka Na Ahịa Nhọrọ. N'ime ya, anyị na-akọwasị ins na outs nke otu esi azụ ahịa nhọrọ na-arụ ọrụ, ihe ịchọrọ ile anya tupu ịzụta nkwekọrịta, yana nke kachasị mkpa - otu ị ga - esi nweta ego na oghere.
Mara: Ikwesiri ịchọpụta ma ị na-azụ nhọrọ ndị America ma ọ bụ nhọrọ ndị Europe. Ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ, ị nwere ike ịpụ na ahia gị tupu nkwekọrịta gị agwụ. Ọ bụrụ na ọ bụ nke abụọ, ị gaghị enwe ike.
Gịnị bụ Nhọrọ?
Tupu anyị achọpụta otu usoro azụmaahịa si arụ ọrụ, anyị kwesịrị ibu ụzọ tụlee ihe nhọrọ bụ n'ezie. Na nkenke, nhọrọ na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọdịnihu nke ngwa ahịa na-enweghị iwere nnweta ozugbo. Kama, nhọrọ na-enye gị nri, ma ọ bụghị ụgwọ, ịzụta ma ọ bụ ree akụ ahụ na ụbọchị ọzọ. Nke a dị nnọọ iche na ọdịnihu, ebe iwu chọrọ ka ịnwe gị mgbe nkwekọrịta gị gwụrụ.
Nke a pụtara ìhè na Eprel 2021 mgbe ọnụahịa nke ọdịnihu nke mmanụ gafere, ebe ọ bụ na ndị na-ejide nkwekọrịta enweghị ikike iji nweta nnyefe! N'ihe banyere nhọrọ, ozugbo ịkwụ obere 'ego', ị ga-enweta ahịa. Ebumnuche kachasị bụ ka akụ gị gafere ma ọ bụ n'okpuru 'ọnụahịa iku' tupu nkwekọrịta nhọrọ emebie. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị kwụrụ $ 100 adịchaghị iji zụta nhọrọ ngwaahịa 100 IBM.
Ndị nkwekọrịta nwere ọnụahịa iku nke $ 150 na ngwụcha nke ọnwa 1. Ọ bụrụ n ’ọnụahịa IBM karịrị ọnụ ahịa $ 150 tupu mmebi, ị na-enweta uru. Uru gị dabere na ọnụahịa ahịa n'oge mmebi, belata ọnụahịa iku. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na IBM emechi na $ 160, nke a bụ $ 10 karịa ọnụahịa iku $ 150. I jidere nkwekọrịta 100, nke a pụtara na site n'iji ikike gị ịzụta ebuka na ọnụahịa iku - ị nwetara uru $ 1,000 ($ 10 x 100 nkwekọrịta).
Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ma ọ bụrụ na emechiri ego IBM na ọnụahịa dị n'okpuru $ 150, mgbe ahụ ị ga-enwe ego $ 100 gị. Agbanyeghị na ị furu efu, ị nwere ike ịkọwa maka usoro ọdịnihu nke ngwaahịa na-enweghị mkpa ịzụta oke mbak. N'ezie, ịnwere ike ịzụta nkwekọrịta nhọrọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ klaasị ọ bụla. Nke a gụnyere ihe niile site na indices, ike, ọla siri ike, ETFs, na cryptocurrencies. Ka anyị na-ekpuchi ihe zuru ezu mgbe e mesịrị, ị ga-achọ iji onye na-ere ahịa na-achịkwa n'ịntanetị iji nweta ohere ịzụ ahịa nhọrọ.
Uru na ọghọm nke ahia Nhọrọ
Inwere ikike, mana obughi ibu oru izuta ngwa ahia n’oge ozo
Nhọrọ nwere ike ịkwado obere ihe egwu, nkwụghachi azụ dị elu
Ọtụtụ narị usoro nchịkwa nhọrọ ịzụ ahịa ịhọrọ site na
Imirikiti ndị na-azụ ahịa nhọrọ ọhụụ na-efufu ego
Ingghọta Nhọrọ --zụ ahịa - Ihe Ndị Bụ Isi
N'adịghị ka ọdịnala azụmaahịa ọdịnala - ebe ịchọrọ naanị ịzụta akụ ma nwee olile anya ire ya ọzọ na ụbọchị na-esote, azụmaahịa nhọrọ dị ọtụtụ karịa. N'iburu nke ahụ n'uche, anyị ga-eduzi usoro ahụ site na ntinye site na nkwụsị.
Oku Nhọrọ ma Tinye Nhọrọ
Iji mee ka bọl ahụ na-agagharị, ị ga-ebu ụzọ chọpụta ụzọ ị chere na akụ ahụ ga-esi aga ahịa. Na ụwa nke nhọrọ trading, ị ga-ma mkpa ịzụta 'oku nhọrọ' ma ọ bụ 'tinye nhọrọ'.
Na ya kacha mkpa, ma ọ bụrụ na ị na-eche na akpan owo uche dịkwuo na price, mgbe ahụ, ị ​​ga-mkpa ịzụta oku nhọrọ. Nke a bụ otu ịtụkwasị 'ịzụta ihe' n'ọhere ọdịnala ọdịnala, nke pụtara na ị na-aga 'ogologo' na akụ ahụ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na i chere na akụ ahụ ga-aga ala na uru, ị ga-achọ ịzụta 'tinye nhọrọ'. N'ebe a na-ere ahịa ọdịnala, nke a bụ otu ịtụkwasị 'ire ere', nke pụtara na ị na-aga 'obere' na ngwa ahịa.
Price Kụọ ụgwọ
Ozugbo i kpebiri ma ịchọrọ itinye oku ma ọ bụ tinye nhọrọ, ịkwesịrị ịtụle ụgwọ iku nke akụ ahụ. N'ihe banyere nhọrọ nhọrọ, nke a bụ ọnụahịa nke ga-ekpebi ma ahia gị ọ ga-aga nke ọma. Ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na iku price na Apple ngwaahịa bụ $ 280.
Ọ bụrụ na itinye nhọrọ oku, nke a pụtara na ịchọrọ Apple ebuka iji mechie na ọnụahịa dị elu karịa $ 280 mgbe nkwekọrịta ahụ gwụrụ. Ọ bụrụ na ị tinye nhọrọ tinye, mgbe ahụ ị ga-achọ ọnụahịa ahụ ịnọdụ ala n'okpuru ọnụahịa $ 280
Nhọrọ nhọrọ na-enyekarị gị ọtụtụ iku iku ịhọrọ site na. Nke a ga - emetụta oke nke ị chọrọ iji bulie ya. N'aka ozo, dika odi ka amuma gi na abia na mmezu abawanye, dika kari.
N'ihe yiri ya na nkwekọrịta n'ọdịnihu, nhọrọ ga-enwe ụbọchị mmebi mgbe niile. Nke a bụ ụbọchị ị ga - enwe ike iji ikike gị zụta ma ọ bụ ree akụ ahụ. Na ọdịnala nhọrọ ahia ọdịnala, a na-edozi ụbọchị mmechi maka Fraịde nke atọ nke ọnwa ọ bụla.
Otú ọ dị, site na iji onye na-ere ahịa n'ịntanetị ị ga-enwekwu mgbanwe. N'ezie, nkwekọrịta nhọrọ na-amalite site na ụbọchị 1, ruo otu afọ.
Iji nweta nhọrọ ahịa a na-ekwu, ị ga-akwụ ụgwọ ego dị elu. Nke a na-arụ ọrụ dịka nkwụnye ego na-enweghị nkwụghachi. Yabụ, ọ bụrụ na amụma gị ziri ezi, ị ga-ewepu ego ole na ole na nloghachi gị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ $ 200 iji nweta ahịa ahụ, ahịa gị wee rite $ 500 na uru, uru gị bara uru bụ $ 300. Ọ bụrụ na ahia nhọrọ gị ejedebeghị na ego ahụ ga - akwụsị - ị ga - efu ego.
N'ihe banyere oke nke ego achọrọ, nke a ga-adabere n'ọtụtụ mgbanwe. Nke a gụnyere ma ọnụahịa ahịa ugbu a yana ọnụahịa iku nke akụ, mgbe nkwekọrịta ahụ gwụrụ, yana ma akụ ahụ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ọmụrụ nwa.
N'ikwu nke ahụ, ụgwọ a na-akwụkarị ụgwọ ga-anọdụ ala na 5-10% nke ọnụahịa ego.
Ka anyị lelee ihe atụ ọsọ ọsọ dabere na ego nke 5%
Think chere na ebuka Amazon ga-aga n’ihu n’izu ndị na - abịa
Dịka, ị kpebiri ịzụta nhọrọ oku
Uru ahịa Amazon dị ugbu a bụ $ 2,300
Ọnụahịa iku na nhọrọ nhọrọ bụ $ 2,500
Nkwekọrịta ahụ ga-agwụ na ọnwa 2
Na 5% nke $ 2,300, ego gị ruru $ 115
Ọ bụrụ na Amazon mechiri n'ime ọnwa abụọ na $ 2,700 - nke a ga-abụ $ 200 karịa ọnụahịa iku. Obere ihe $ 115 gị, nke a ga-ahapụ gị $ 85 uru kwa òkè.
N’ụzọ dị oke mkpa, ọ ga-abụ na ị gaghị enwe ike ịzụta naanị otu òkè, ebe ndị na-agbanwe nhọrọ na-etinyekarị nha ntakịrị - nke anyị na-ekpuchi n’okpuru.
Opekempe Lot Size
N'ihe atụ anyị nyere n'elu na ebuka Amazon, anyị dabere na uru anyị na otu òkè. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị na-ere ahịa nhọrọ ga-ajụ gị ka ị zụta ogo pere mpe pere mpe. Na ohere nhọrọ ọdịnala, nke a na-abụkarị nkwekọrịta 100. Nke a abụghị mgbe ọ bụla ọ bụ ezie - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa nke na-ebu nnukwu ibu.
Ka o sina dị, ka anyị lelee ihe atụ dị ngwa nke otu opekata mpe nke nkwekọrịta 100 ga-esi metụta uru gị na uru gị.
Ka anyị kwuo na ịchọrọ ịzụta nhọrọ oku na ngwaahịa Disney, nke nwere ọnụahịa ahịa $ 100 ugbu a
Ọnụahịa iku bụ $ 107 na nhọrọ na-agwụ na ụbọchị 30
Onu ahia na nhọrọ oku bu 7% nke onu ahia ugbua - nke ruru $ 7
Na ore ahia achọ a kacha nta ọtụtụ nke 100 contracts
Nke a pụtara na ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ ihe ruru $ 700
Ka anyị kwuo mgbe ahụ na nhọrọ ndị ahụ dabara na ego, yana ebuka Disney dị ọnụ ahịa na $ 125 mgbe nkwekọrịta ahụ gwụchara n'ime ụbọchị 30. Nke a ruru ọnụahịa nke $ 18 karịa ọnụahịa iku nke $ 107. Dika ijide nkwekorita 100, nke a ruru $ 1,800 na uru. Ozugbo i wepụrụ $ 700 nke ị kwụrụ ụgwọ n'ihu, nke a hapụrụ gị $ 1,000 na uru.
Nhọrọ ahia: Gini di iche m nwere ike ahia?
Yabụ ugbu a ị nwere echiche izugbe banyere otu nhọrọ si arụ ọrụ, anyị ga-enyocha ọtụtụ akụ ị nwere ike ịzụ ahịa ugbu a.
Nke a gụnyere:
Ihe ndozi: Klas kachasị ewu ewu maka nhọrọ ahia bụ nke ahịa na-acha anụnụ anụnụ. Imirikiti ndị na-ere ahịa ga-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ ahịa - gụnyere nke nke NASDAQ, NYSE, na LSE.
Ụdị: Ga-enwe ikike ịzụta oku ma tinye nhọrọ na wider ngwaahịa ahịa. Mara dị ka indices (ma ọ bụ ndeksi), nke a gụnyere Dow Jones, NASDAQ 100, FTSE 100, na S&P 500.
Ego mba: Enwere ike ịzụta na ire nhọrọ na ụlọ ọrụ Forex. Nke a dabere na otu ụzọ ego dị ka AUD / USD ma ọ bụ GBP / USD.
Ngwaahịa: Nhọrọ bụ ụzọ dị mma iji kpughee oghere nnweta ọtụtụ ijeri dollar. Nke a gụnyere ọla edo, mmanụ, gas, ọlaọcha, ọka wit, shuga, na ọka. N'ezie, ndị na-emepụta ihe na-azụkarị nkwekọrịta nhọrọ iji gbachitere ọnụahịa ahịa ugbu a.
ETFs: I nwekwara ike ịzụta nhọrọ na ETF (Exchange Traded Fund) oghere. Ndị ETF na-agbakọ ọtụtụ akụ - site na ezigbo ala, ọla edo, na ahịa ahịa.
Ego: Ọnụ ọgụgụ dị nta nke nyiwe ugbu a na-enye gị ohere ịzụ ahịa na Bitcoin. Agbanyeghị, ọ nweghị ahịa ahịa akwadoro maka nke a - yabụ kpachara anya.
Ọ bụrụ na ị na-eji saịtị ịzụ ahịa ọkachamara, ị nwere ike ịnweta ọtụtụ puku ahịa. Nke a na - enye gị ohere ịmepụta usoro ịzụ ahịa nhọrọ dị iche iche na pịa bọtịnụ.
Nhọrọ ahia maka Izu ahia
Ebumnuche nke nhọrọ ịzụ ahịa bụ okpukpu abụọ. Dika anyi ekpughere n'ime ntuziaka anyi rue ugbu a, ebumnuche kachasị nke ịzụrụ oku na itinye nhọrọ bụ ịkọ nkọ banyere ọnụahịa ọdịnihu nke akụ. N'ime nke a, ị nwere olile anya inweta uru.
Otú ọ dị, ahia nhọrọ bụkwa a ukwuu irè usoro maka hedging. N'ezie, nke a bụ kpọmkwem ihe ndị na-ere ngwaahịa na-eme iji gbochie ọnụahịa ahịa ugbu a nke akụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị ọrụ ugbo ọka na-erite uru ugbu a site na ọnụahịa dị elu karịa ahịa, ha nwere ike kpebie ịzụta nhọrọ ha ga-etinye.
Ọ bụrụ na mgbe ọnụahịa ọka daa, onye ọrụ ugbo agaghị efu. Nke a bụ n'ihi na agbanyeghị na ha ga-enweta ọnụahịa dị ala maka ọka ha, ha ga-enweta ego na ahịa azụmaahịa site na nhọrọ ndị etinye. Ka o siri dị, ihe niile na - edozi - pere mpe obere ego na ụgwọ.
Nke a bụkwa ikpe maka ndị etinye ego na ahịa ego. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na i jidere ihe ruru $ 10,000 nke ebuka Amazon. Feel na-eche na nlaazu zuru ụwa ọnụ na-abịanụ, yabụ na ịchọrọ ịchekwa pọtụfoliyo gị. Dị ka ndị dị otú a, ị na-azụta tinye nhọrọ.
American vs European Nhọrọ
E nwere isi nhọrọ abụọ dị na mpaghara itinye ego - nhọrọ America na nhọrọ ndị Europe. Nke ị na-azụta ga-ekpebi mgbe ị ga - eji ikike gị zụta ma ọ bụ ree akụ na - akpata ya.
Optionszụ ahịa Nhọrọ Ndị America
Nhọrọ ndị America na-enye gị ohere ịpụ ahịa nhọrọ gị n'oge ọ bụla n'etiti oge ị na-akwụ ụgwọ kacha elu, na ụbọchị nke nkwekọrịta ahụ ga-agwụ.
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nhọrọ gwụ na July 1st 2021, ị nwere ike igosipụta ikike gị ịzụta ma ọ bụ ree ngwa ahịa oge ọ bụla tupu ụbọchị a. Nke a bara uru dị ukwuu maka gị dị ka onye na-azụ ahịa nhọrọ, ebe ị nwere ikike ịkpọchi-uru gị nke ọma tupu nkwekọrịta gị agwụ.
Ka anyị lelee ihe atụ ọsọ ọsọ.
Havezụrụ nhọrọ oku na mmanụ na ọnụahịa iku nke $ 33 dollar kwa gbọmgbọm
Nhọrọ ndị ahụ ga-agwụ na August 14th nke 2021, ma ị nwere nkwekọrịta 100
Kwụrụ ụgwọ nke naanị $ 1.30 kwa nkwekọrịta
N’abalị anọ nke ọnwa Ọgọstụ, ọnụ ahịa mmanụ dị na $ 4 kwa gbọmgbọm, nke ruru $ 45 karịa ọnụ ahịa iku nke $ 12
Ka o siri dị, ị kpebiri itinye ego na nhọrọ ndị America gị site na iji ikike gị ịzụta akụ ahụ
I nwere 100 contracts, ị mere $ 12 kwa nkwekọrịta - obere ihe $ 1.30, yabụ uru gị niile bụ $ 1,070.
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, onye ahịa ahụ nwere ike ịgbachi-na uru ha 10 ụbọchị tupu nhọrọ emebie. Onweghi onye matara ma nke a ma obu na nke a bu ezi uche rue na ngwụcha nke August 14th. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa mmanụ emechiri $ 50 kwa gbọmgbọm, onye ahịa ahụ tụfuru nloghachi dị elu.
N’isi nke ọzọ, ọnụ ahịa mmanụ nwere ike ịda n’okpuru ọnụego iku nke $ 33, nke pụtara na ha ga-efunahụ ego ha, ma ghara ị nweta uru ọ bụla!
European Nhọrọ ahia
N'adịghị ka nhọrọ ndị America, nhọrọ ndị Europe anaghị enye gị ohere iji ikike gị ịzụta ma ọ bụ ree ngwa ahịa ahụ tupu nhọrọ emebie. N'ihe atụ dị n'elu, anyị kwuru ka onye ahịa ahụ si na ego ụbọchị 10 tupu ụbọchị mmebi.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na azụtara zụrụ site na nkwekọrịta nhọrọ ndị Europe, onye na-achụ ego agaghị enwe ike itinye ego na uru ha n'oge. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ha chere ruo August 14th iji hụ ọnụahịa mmanụ emechiri.
N'otu aka, nke a na - etinye gị na ọghọm megide nhọrọ ndị America, ebe ị na - enweghị mgbanwe nke ịkpọchitere uru gị n'oge. N'aka nke ọzọ, nhọrọ ndị Europe na - ejikarị ọnụ ala dị ala karịa, yabụ ịkwesịrị iburu nke a.
Ọdịiche dị n'etiti Nhọrọ ahia na ọnụọgụ abụọ
On top of omenala nhọrọ trading ohere, ị nwekwara ike-abịa gafee 'ọnụọgụ abụọ' nhọrọ. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ myirịta dị n'etiti abụọ ahụ, ha bụ n'ezie klas dị iche iche dị iche iche.
Dị oke mkpa - yana dịka aha ahụ na-egosi, ọnụọgụ abụọ nhọrọ nwere nanị ihe abụọ ọ ga-arụpụta. Ga - emeri oke ego dị na ahia ahụ, ma ọ bụ tufuo oke osisi gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụọgụ mmeri na nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ 70%, na ị ga - etinye $ 1,000, mgbe ahụ ị ga - emeri $ 700 maka ịdata na ego ahụ.
Ọ bụrụ na ọnụahịa iku bụ $ 40, ọ ga-enweghị isi ma ọ bụrụ na akụ ahụ mechiri na $ 41, $ 100, ma ọ bụ $ 5,000 - ị ka ga-enweta otu ego ahụ. Ọ bụrụ na akụrụngwa abanyeghị na ego ahụ, ị ​​ga-efunahụ $ 1,000 gị.
N'ihi ya, anyị ga - ahọrọ ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ, ebe ọ bụ na ị ga - enweta ego ị ga - enweta. N'aka nke ọzọ, ọnweghị oke ị ga - enweta site na ịzụ ahịa nhọrọ ọdịnala. Nke a bụ n'ihi na nnukwu ọdịiche dị n'etiti ọnụego iku na ọnụ ahịa mmechi nke azụmaahịa gị, uru ka ị na-enweta.
Otu esi amalite ahia taa
Yabụ ugbu a ị marala etu ọnụọgụ nhọrọ nhọrọ si arụ ọrụ, anyị ga - egosi gị otu ị ga - esi bido itinye ego na taa. Site na ịgbaso usoro ndị edepụtara n'okpuru, ị nwere ike ịnwe ma ọ bụ kpọọ nhọrọ ị ga-ebi na ahịa na-erughị nkeji iri na ise!
Nzọụkwụ 1: Họrọ Nhọrọ Trazụ ahịa Nhọrọ
Nzọụkwụ mbụ ịkwesịrị ịme bụ ịhọrọ saịtị azụmaahịa nke na-egbo mkpa gị. Kwesịrị itinye aka na usoro nyocha ogologo oge, ebe ọ bụ na ndị na-ere ahịa abụọ abụghị otu.
Nke a kwesịrị ịgụnye usoro ọnụọgụ dị ka:
Iwu: Gbaa mbọ hụ na saịtị azụmaahịa nhọrọ na-achịkwa site na otu ikikere ikikere. Ihe atụ gụnyere FCA (UK), CySEC (Cyprus), na ASIC (Ọstrelia).
Akụ ndị a pụrụ ịdabere na ya: Nyochaa klas ndị nwere nhọrọ ịzụ ahịa saịtị na-enye. Ihe ntanetị kachasị mma ga-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku ahịa.
Ụzọ ịkwụ ụgwọ: Họta saịtị ịzụ ahịa nhọrọ nke na-enye gị ohere ịdebe ma wepụ ego na usoro ịkwụ ụgwọ ịchọrọ.
American ma ọ bụ European: Gbaa mbọ hụ na ị ghọtara ihe kpatara nhọrọ ahụ. Karịsịa, onye na-ere ahịa na-anabata nhọrọ ndị America, nhọrọ ndị Europe, ma ọ bụ nchikota ha abụọ?
Adịghị elu vs iku Ahịa: Ikwesiri inyocha uzo asọmpi ahia di iche iche di ma o bia n'ile. Yabụ, kedu ụgwọ dị elu n'ihe metụtara ụgwọ iku?
Nkwado Ndị Ahịa: Chọpụta ihe nkwado ndị ahịa nhọrọ ntanetị na-enye. Nke a ga - abata ma ọ bụrụ na ịchọrọ onye na - ere ahịa iji kọwaa etu ahịa ị họọrọ si arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa metrik edepụtara n'elu, anyị ga-atụ aro iji otu n'ime ndị ọrụ atọ ahụ anyị kwadoro na ibe a. A na-achịkwa usoro nyiwe anyị kachasị elu, na-enye ọtụtụ ahịa nhọrọ, ma na-enye gị ohere ịkwụnye ego na nkwụnye ego / kredit.
Nzọụkwụ 2: Mepee Akaụntụ na Bulite NJ
Ozugbo ịchọtara ebe ịzụ ahịa nhọrọ kwesịrị ekwesị, ị ga-emepe akaụntụ. Na ore ahia ga-arịọ gị ka ịnye ụfọdụ ozi nkeonwe, dị ka nke gị:
Nọmba ekwentị mkpanaka
Na ore ahia ga-achọkwa otu akwụkwọ NJ gị gọọmentị nyere. Nke a bụ iji hụ na ikpo okwu a ka na-ekwenye na iwu mgbochi ego. Dị ka nke a, bulite otu akwụkwọ paspọtụ gị ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala.
Nzọụkwụ 3: Nye Akaụntụ Nhọrọ ahia gị
Iji nweta nhọrọ ahia ahịa, ị ga-akwụ ụgwọ a adịchaghị na ore ahia. Ka o siri dị, ugbu a ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ akaụntụ azụmaahịa gị. Imirikiti, ma ọ bụghị ihe niile, ndị na-ere ahịa ga-enwe ọnụ ụzọ nkwụnye ego kacha nta nke ị ga-achọ izute.
N'ihe banyere usoro ịkwụ ụgwọ, nke a na - agụnye:
Ewezuga nhọrọ akaụntụ ụlọ akụ, nhọrọ nkwụnye ego ndị ọzọ niile bụ ozugbo.
Kwụpụ 4: Chọta Ahịa Nhọrọ iji Azụ ahịa
Ugbu a ị kwụrụ ụgwọ akaụntụ azụmaahịa gị, ị ga-achọ ugbu a ahịa iji zụọ ahịa. Ndị na-ere ahịa na-enyekarị ọtụtụ puku ahịa, yabụ chọọ akụ na-amasị gị.
Ozugbo ịmechara, ị ga-enyocha usoro ndị a:
Ọnụahịa ahịa ugbu a nke ihe onwunwe
Na iku price nke akpan owo
Onu ahia choro ahia
Mgbe nkwekọrịta nhọrọ gwụrụ
Ma nhọrọ ndị ahụ bụ European ma ọ bụ American
Often ga-ahọrọkarị n'ọtụtụ ahịa na otu ngwa ọrụ ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụ ahịa Nike, onye na-ere ahịa nwere ike ịnye ọnụahịa dị iche iche - nke ọ bụla na-ebu ọkwa dị iche iche.
Kwụpụ 5: Zụrụ Oku ma ọ bụ Tinye Nhọrọ
Ozugbo inyocharu nhọrọ ahia nke onye na-ere ahia na-enye, mgbe ahụ ị ga-achọ ịzụ ahịa. Dị ka ndị a, kpebie ma ị chere na akụrụngwa ahụ ga - abawanye (nhọrọ oku) ma ọ bụ belata (tinye nhọrọ) megide ọnụego iku.
Then ga - achọ ịbanye nọmba nke nkwekọrịta ịchọrọ ịzụta - ijide n'aka na ị ga - ezute nha kacha nta. Onu ogugu onu ogugu ga - emelite ka i tinye onu ogugu nke nkwekorita n'ime igbe iwu.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ịchọrọ ịzụta nhọrọ oku na ebuka Nike, nke na-eburu ego $ 4 kwa ngwaahịa. Ka ị na-abanye '200' n'ime igbe ego, osisi ahụ ga-agbanwe na $ 800 ($ 4 adịchaghị x 200 contracts).
N'ikpeazụ, mezue usoro ahụ. Ozugbo ịmechara, ahia nhọrọ gị dị ndụ!
Ebe ahia ahia kacha mma na 2021
Na-achọ saịtị azụmaahịa kachasị mma maka 2021, mana ịnweghị oge iji nyochaa onwe gị? N’okpuru ị ga - ahụ nhọrọ atọ kachasị elu anyị. Onye ọ bụla n'ime ndị na-esote ndị na-eso ụzọ nwere ikikere site na otu otu, nyere gị ohere itinye ego na debit / kaadị akwụmụgwọ, yana nke dị oke mkpa - nye ọtụtụ puku ahịa.
1. IG - Ebe ahia di nma nke ndi ahia niile
Amalitere na 1974, IG bụ nnukwu ụlọ ahịa UK na-anabata ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile. N'elu CFDs na Forex, ikpo okwu na-akwado ngalaba nhọrọ nhọrọ zuru ezu. Nwere ike itinye ihe mpempe akwụkwọ iji bulie ogo ahia gị, yana nkwụnye ego kachasị na-amalite na £ 250. Nwere ike ịchọta akaụntụ gị na debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ akaụntụ akụ.
Guzobe na 1974
Ndị FCA, ASIC, na MAS na-achịkwa ya
Nkwụnye ego dị oke elu na £ 250
2. Index nke Obodo - Ngalaba ahia ahia di otutu
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmepụta pọtụfoliyo dị iche iche nke nkwekọrịta nhọrọ, ọ nwere ike ịba uru ịtụle Index City. Onye na-ere ahịa n'ịntanetị na-enye ndepụta sara mbara nke ahịa nhọrọ, gụnyere ihe niile sitere na ebuka, ngwaahịa, na indices. Nwere ike ịmalite na akaụntụ na nkeji, yana nkwụnye ego kachasị na-amalite na £ 100. A na-achịkwa ikpo okwu nke ọma, yana ikikere gụnyere UK FCA.
Top-notch nkwado ndị otu
Aha ọma na omenala na-ere ahịa ọdịnala
Usoro KYC dị ntakịrị nhịahụ
Gaa na Ndepụta Obodo
3. CMC Ahịa - Nhọrọ dingzụ ahia Ntanetị na Ngwaọrụ Njikwa Egwu
Amalitere na 1989, CMC Markets na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku ahịa - gụnyere nke oghere nhọrọ. Anyị na-amasị onye na-ere ahịa maka onyinye nke ngwaọrụ njikwa ihe egwu, nke na-enyere aka belata mfu gị na mmemme nke ida ahịa. Ahịa CMC anaghị eji ego nkwụnye ego pere mpe, ị nwere ike iburu akaụntụ debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ akaụntụ akụ gị.
Ọtụtụ puku ahịa ego kwadoro
Ihe ndekọ ego egwu na-enweghị ihe egwu
Edepụtara na London Stock Exchange
More ruru eru ka elu ahịa
Gaa Leta ahịa CMC
Nhọrọ ahia na-enye gị ohere ịnweta mgbasa ozi n'ọtụtụ puku ahịa na-enweghị mkpa ịzụta akụ na-akpata kpamkpam. Ma ị kwenyere na akụ ahụ ga-arịgo ma ọ bụ gbadaa n'ahịa, ị ga-azụta obere ego.
N'ime ime nke a, ị na-enwe ohere ịlaghachi azụ n'ụzọ na-enweghị nsogbu. Na nke ahụ kwuru, ị ka kwesịrị inwe nghọta doro anya banyere otu ebe egwuregwu azụmaahịa si arụ ọrụ - yabụ anyị nwere olile anya na onye ndu anyị enyerela aka kpochapụ alụlụ ahụ.
Anyị atụlewokwa saịtị atọ anyị kacha ahọrọ maka ịzụ ahịa nke 2021, n'akụkụ otu nzọụkwụ site na otu esi amalite taa. Dị ka ndị dị otú a, site na iji otu n'ime nyiwe anyị akwadoro ị nwere ike ịnweta nkwekọrịta ọkpụkpọ / itinye nhọrọ ibi na ahịa n'ime nkeji ole na ole!
Gịnị bụ nhọrọ trading?
Nhọrọ na-enye gị ikike, mana ọ bụghị ọrụ, ịzụta ma ọ bụ ree ihe onwunwe na ụbọchị ọzọ. Iji nweta ahịa, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ ego.
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe na saịtị azụmaahịa nhọrọ?
Nke a dabere na saịtị ị họọrọ ịbanye. Iji maa atụ, Ahịa CMC enweghị ego nkwụnye ego pere mpe, ebe IG na-arịọ £ 250.
Kedu ka 'adịchaghị' si arụ ọrụ na azụmaahịa nhọrọ?
The premiom bụ ndị na-abụghị refundable ego na ị na-akwụ iji nweta gị họọrọ nhọrọ trading ahịa. Ọ bụrụ n’ịnaghị ego, onye na-agbanwe ego ga-edebe ya.
A na-achịkwa saịtị ịzụ ahịa nhọrọ?
Site na iwu, saịtị azụmaahịa nhọrọ ga-ejide ikikere nchịkwa. Anyị na-ahọrọ saịtị ndị na-achịkwa site na otu otu dị ka FCA, ASIC, ma ọ bụ CySEC.
Kedu ihe dị iche na nhọrọ ndị America na Europe?
Ọ bụ ezie na nhọrọ ndị America na-enye gị ohere iji ikike gị ịzụta ma ọ bụ ree ngwa ahịa tupu mmebi ahụ, nhọrọ ndị Europe anaghị eme. Kama, ikwesiri ichere ruo ụbọchị nkwekọrịta ga-agwụ tupu ị mata uru gị.
Nwere ike itinye ihe nkwụnye ego mgbe ị na-azụ nhọrọ?
Ee, ọtụtụ ndị na-achịkwa azụmaahịa na-enye gị ohere itinye mpempe akwụkwọ mgbe ị na-azụ nhọrọ.
Kedụ ka m ga esi esi nye aka na akaụntụ m?
Nhọrọ nkwụnye ego ndị mara mma gụnyere debit / kaadị akwụmụgwọ na waya akụ. Platformsfọdụ nyiwe na-akwado Paypal.